दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग
काठमाडौं। संघीय संसदमा सत्तारुढ दलका सांसदले प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसदले प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
एमाले सांसद निरु पालले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीसंग स्पष्टीकरण सोध्न माग गरिन्। भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले संविधानविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपालको झण्डा विगार्ने, रंङ, आकार थाहा नहुने कर्मचारीलाई मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको प्रसंग उल्लेख गर्दे सांसद पालले मुख्य मन्त्रीलाई नै स्पष्टीकरण सोध्न माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘यस्ता मुख्य मन्त्रीलाई प्रशिक्षण दिने कि नदिने म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।”
राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले तात्कालीन समयमा भएको नाकाबन्दीलाई होइन भन्नु र प्रधानन्त्रीले सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भनेर मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दा लम्मसारवाद भन्नु दुवै अतिवाद हुने टिप्पणी गरिन्। काठमाडौं धुलो र धुवाको खाल्टो बन्दै गएको भन्दै उनले पाहुनालाई बोलाएर रातारात पिच गर्नु भन्दा जनताको साना, मसिना कुरा सम्बोधनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले दोधारा चाँदनी सिमामा भारतले पटक पटक नेपालीलाई दुख दिने गरेको भन्दै तत्काल रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद छक्कबहादुर लामाले हुम्लामा सडक सुविधा तत्काल पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको शिकार तल्लो बर्गका मात्रै पर्ने गरेको र माथिल्लो वर्गलाई नछोएको भन्दै उनले खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “यो राज्य नर्क हो कि के हो ? सार्वजनिक ऐनलाई खारेज गर्नुपर्छ । यो ऐनको शिकार निमुखा मात्रै हुने गरेका छन्, पुलिसलाई मन नपर्ने वित्तिकै सार्वजनकि मुद्दा लगाउने काम भएका छन्। ”
सांसद दुर्गा पौडेलले प्युठान जिल्लास्थित ओखरकोटबाट २ बर्ष अघि राजदण्ड चोरी भएको भन्दै ऐतिहासिक राजदण्डको तत्काल खोजी सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद इन्दु कुमारी शर्माले च्ुरे संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै आमाको नामबाट सहज नागरिकता दिने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्। त्यसैगरी प्रत्येक गाउपालिका, नगरपालिकामा बुढानिलकण्ठ स्कुल जस्तो स्कुल राखेर त्यही मोडलको शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरिन्।
बैठकमा सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा तेश्रो संसोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेको छ। गृहमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले विधेयक पेस गरेका हुन्।